Neymar oo la dagaallamaya fadeexad culus oo soo wajahday - BBC News Somali
Neymar oo la dagaallamaya fadeexad culus oo soo wajahday
Image caption Neymar ayaa hadda ku sugan Barazil
"Markii ay wada hadleen oo ay ismaandhaafeen, Neymar wuu xanaaqay, wuxuuna sameeyay qalalaase, isagoo damcay inuu xiriir jinsi la sameeyo haweeneyda oo aan raalli ka ahayn", ayaa lagu yidhi qoraalka booliska.
Qoraalka oo lasii amba qaaday ayaa lagu yidhi: "Labo maalmood ka dib, haweeneydii waxay ku laabatay Brazil, iyadoo aan dhacdada ku wargalinin booliska Faransiiska, sababtoo ah aad bay u ciishooneysay waxayna ka cabsaneysay inay arrintan fadeexadda ah ka diiwaan galiso waddan kale".
Image caption Neymar waxaa dhawaan laga xayuubiyay Kabtan nimada xulka qaranka Brazil
Barcelona oo fasaxday Neymar
Bayaan ay eedeynta ka dib soo saareen kooxda maamulka u ah ciyaartoyga ayey ku cambaareeyeen sheegashada 'been abuurka ah' ee lagu fadeexeeyay Neymar, waxayna aad uga caroodeen arrinta foosha xun ee warbaahinta lagu shaaciyay.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in haweeneydaas ay dooneyso inay lacag baad ah ka qaadato Neymar, iyadoo ku marmarsiiyooneysa inuu u geystay kufsi.
Neymar qudhiisa ayaa si toos ah uga hadlay arrintan, wuxuuna sharraxaaddiisa ku bixiyay muuqaal 7 daqiiqo ah oo uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka.
Muuqaalka uu soo dhigay ciyaartoygan, oo aan wali guursanin, ayuu soo raaciyay qoraal ku qoran luuqadda boortaqiiska oo micnihiisu ahaa "lacag baad ah oo la iga rabo awgeed, waxaan ku khasbanaaday inaan soo bandhigo arrimaha khaaska ah ee ku saabsan aniga iyo qoyskeygaba".
Neymar aabihiis oo lagu magacaabo Neymar dos Santos ayaa sidoo kale gaashaanka ku dhuftay eedeymahan, wuxuuna sheegay inay iska caddahay in arrintani ay tahay dabin.
Neymar diyaar ma u yahay Copa América?
Image caption Neymar Jr
Weeraryahanka kooxda PSG ayaa horay looga xayuubiyay kabtan nimada xulka qaranka Brazil, tallaabadaas oo qeyb ka ahayd ciqaab dhinaca anshaxa ah oo dhawaan la marsiinayay.
Dhanka kale, mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee dalka Faransiiska ayaa xiddigan ka mamnuucay saddex ciyaarood, ka dib markii uu feer ku dhuftay qof taageere ah, markii kooxdiisa ay bishii lasoo dhaafay guul darro kharaar kala kulantay kooxda Rennes oo ay la ciyaarayeen fiinaalka tartanka Coupe de France.
Waxaa sidoo kale lagu soo warramay inuu qeyb ka ahaa buuq ka dhacay qolka labiska ee ciyaartoyda.
Tartanka Copa América, oo ay ku loollamaan dalalka koonfurta Ameerika ayaa Brazil ka dhacaya 14-ka bisha Juun ilaa 7-da bisha Luulyo.
Neymar ayaa talaadadii Tababarka laga joojiyay markii uu jilibka ka gaaray dhaac fudud, lamana xaqiijinin inuu saameyn ku yeelan karo ciyaaritaanka tartanka iyo inkale.